४ खेलाडी जसको लागि पछिल्लो दशैं वर्ष महत्त्वपूर्ण रह्यो
काठमाडौँ – गत वर्षको दशैंदेखि यस बर्षको दशैंसम्म नेपाली खेलकुदमा थुप्रै उथलपुथल भए । क्रिकेटले यो वर्ष केहि ठूला सफलता प्राप्त गर्दा केहि महत्त्वपूर्ण अवसर गुमायो । फुटबलको लागि यो वर्ष खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन । उल्टै मुखैमा आएको सफलता पनि फुस्कियो । अन्य खेलमा पनि सफलता भन्दा असफलता नै बढि रह्यो ।
नेपाली खेल जगतमा यो वर्ष केहि खेलाडी निकै चर्चाको शिखरमा पुगे । उनीहरुलाई यसै कसैले चर्चाको शिखरमा भने पुर्याएका होइन । खेलमा गरेको उत्कृष्ट प्रर्दशनले नै उनीहरुले चर्चाको शिखर चुमेका हुन् । गत वर्षको दशैंदेखी यो दशैं सम्म सर्वाधिक चर्चा र सफलता हात पार्ने क्रिकेटका सन्दीप लामिछाने पहिलो नम्बरमै रहे । सन्दीप मात्र होइन यो पछिल्लो वर्ष अन्य खेलाडीले पनि उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । गएको दशैंदेखी यो दशैंसम्म हेर्ने हो भने नेपाली खेलकुदमा क्रिकेट खेलाडीको प्रर्दशन वर्चश्व रह्यो । अन्य थुप्रै खेलाडी पनि सफल भए । समग्रमा यो दशैंवर्ष हेर्ने हो भने यी ४ खेलाडीको लागि अझ विशेष र महत्वपूर्ण सावित भयो ।
लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिममा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा पनि सनसनई मच्चाई रहेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा नेपाललाई डिभिजन टु हुँदै वान डे मान्यता दिलाउन सन्दीपको प्रर्दशन निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । सन्दीप नेपालमा मात्र होइन विश्वका चर्चित लिगहरुमा पनि सानदार प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । विश्वका चर्चित आईपीएल,क्यारेवियन प्रिमियर लिग,क्यानडा प्रिमियर लिगमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका सन्दीप अफगानिस्तान प्रिमियर लिग हुँदै अन्य लिगमा पनि अनुबन्ध हुने क्रम जारी छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा सन्दीप अन्तर्राष्ट्रिय लिग खेलेरै करोडपती बनेका छन् । सन्दीपको क्षमता नेपाली क्रिकेटको स्तर भन्दा धेरै माथिको रहेको छ । सोझो अर्थमा टेस्ट खेल्ने खेलाडी र सन्दीपको स्तर एउटै हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला । सन्दीप पछिल्लो एक बर्षमा लिष्ट ए ,वान डे र टी–२० क्रिकेटबाट नेपालबाट सर्वाधिक विकेट लिने बलर पनि हुन् । पछिल्लो एक बर्षमा उनले हात पारेको सफलता हेर्ने हो भने यो दशैंवर्ष सन्दीपको लागि सबै भन्दा बढि सफल र महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
नेपाली टोलीका तीव्र गतिका बलर करण केसीलाई यस वर्ष बलिङ भन्दा पनि ब्याटिङले चर्चाको शिखरमा पुर्याइदियो । करणको अविश्वसनिय प्रर्दशनले नै नेपालले पहिलो पटक चार बर्षको लागि वा डे मान्यता पाएको हो । वान डे मान्यताको कुरा गर्दा सबै भन्दा पहिला करण केसीको नै नाम आउने गर्दछ । डिभिजन टु को अन्तिम खेल फागुन २ मा नेपाल क्यानडासँग भिडिरहेको थियो । जुन खेल जिते नेपाल एक दिवसिय विश्वकप छनोट खेल्न पाउथ्यो । हारे डिभिजन २ मा नै रहनु पथ्र्याे । क्यानडाले दिएको १ सय ९६ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको नेपाल ४२ ओभरमा १४४–९ को स्थितीमा पुगेको थियो ।
क्रिकेट फ्यानले मात्र होइन स्वयं पेभिलिएनमा बसेको नेपाली टोलीले पनि हार स्विकार गरि सकेका थिए । क्यानडाका खेलाडी मैदान बाहिर जीतको खुसि मनाइसकेका थिए । तर करणले अविश्वसनिय ब्याटिङ गर्दै अन्तिम बलमा नेपाललाई १ विकेटको सनसनीपूर्ण जीत दिलाए । करणले जीत दिलाउनको लागि मात्र ३१ बलमा ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ४२ रनको नट आउट ब्याटिङ गरेपछि एक दिवसिय विश्वकप छनोट प्रतियोगिताका लागि छनोट भएको थियो ।
करणले जादुमय ब्याटिङ गर्न नसकेको भए नेपाली क्रिकेट ४ बर्षको लागि अध्यारो गतिमा ओरालो लाग्ने निश्चित थियो । अर्थात अहिले पाएको वान डे पाउने थिएन । करण र फ्यानलाई यो प्रर्दशन सधैँ भरी अविस्मरणिय बन्ने छ । करणको लागि अझ झनै विशेष र जीवनकै सबै भन्दा बढि महत्वपूर्ण रहन सफल भयो ।
सुनिल बल नेपाली फुटबल टोलीका उदाउँदा २० बर्षिय मिडफिल्डर हुन् । थ्रि स्टारबाट घरेलु लिग खेल्ने बल पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका छन् । एक महिना अघि बंगलादेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग २–१ ले पराजित भएपछि दोस्रो खेलमा भुटानबीरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव थियो । नेपाल पराजित भए सेमिफाइनल यात्रा बन्द हुने थियो । दोस्रोे खेलमा प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पहिलो रोजाईमा सुनिल बललाई मैदानमा उतारे ।
नेपालले भुटाननाई ४–० ले पराजित गर्यो त्यसको नायक सावित भए बल । सुनिलले १ गोल आफैले गर्दा अन्य २ गोलका लागि उत्कृष्ट पास दिएका थिए । एन्फा एकेडेमीबाट उत्पादीत बल को गृहजिल्ला हेटौँडा हो । बलले यो बर्ष टिममा कम अवसर पाए तर पाए जतीका सबै अवसर भरिपूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न सके । मोफसलका प्रतियोगिताहरुमा थ्री स्टारका लागि पनि उनले महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । बलका लागि पनि यो दशैंबर्ष निकै महत्वपूर्ण सावित भयो ।
नेपाली टोलीकको भविष्यको कप्तानका रुपमा हेरिएका दिपेन्द्र सिंह ऐरी भरपर्दा अलराउण्डर हुन् । ऐरीलाई पारस खड्का पछिको कप्तानको रुपमा हेरिएको छ । मिडिल अडरमा ब्याटिङ गर्ने ऐरीले टिमको आवश्यकता र परिस्थीति अनुसार आक्रमक र रक्षात्मक दुबै ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । साथै पार्टटाइम स्पिन बलिङ पनि गर्छन् । घरेलु तथा यू–१९को सफल कप्तानीको भूमिका निर्वाह गरि सकेका ऐरीलाई भविष्यको राष्ट्रिय टिममको कप्तानको रुपमा हेरिएको छ ।
मलेसियामा सम्पन्न गत संकरणको यू–१९ एसिया कपमा भारतीय यू–१९ टोलीलाई १९ रनले पराजित गर्दै नेपाल पहिलो पटक ऐतिहासिक सफलता दिलाउन ऐरीले उत्कृष्ट अलराउण्डर प्रर्दशन गरेका थिए । कप्तान ऐरीले उक्त खेलमा ८८ रन प्रहार गर्नुका साथै महत्वपूर्ण ४ विकेट लिएका थिए । ऐरी यू–१९ र घरेलु प्रतियोगिता मात्र होइन राष्ट्रिय टोलीमा पनि उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । नेपाललाई डिभिजन टु हुँदै वान डे मान्यता दिलाउन देखी पहिलो वान डे खेल जिताउन सम्म ऐरीको प्रर्दशन महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
गत मार्च १५ मा जिम्बाब्वेमा एक दिवसिय विश्वकप छनोटमा पप्पुवा न्युगिनीलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै वान डे मान्यता प्राप्त गर्न ऐरीको प्रर्दशन निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो । जुन खेलमा ऐरीले ब्याटिङमा ५० रन र बलिङमा ४ विकेट लिएका थिए । पछिल्लो एक बर्षमा ऐरी हरेक खेलमा राम्रो प्रर्दशन गरि रहेका छन् । नेपाली टोलीका महत्वपूर्ण अलराउण्डर बनि सकेका ऐरीको पछिल्लो एक बर्षको प्रर्दशन र टिमलाई दिलाएको सफलता हेर्ने हो भने यो दशैंवर्ष निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५०८:४२
जर्मनी विश्वकपबाट बाहिरीएसँगै दीपकराज गिरीको आयो कडा फेसबुक स्टाटस ! [ स्टाटससहित ]
नेपालको एक सय रन पूरा: निकै आक्रामक ब्याटिंग गरिरहेका पारस खड्का आउट…
विश्वस्तरमा पहिलो-पटक स्वर्ण जितेका महेश्वर महर्जन भोलि नेपाल आउदै!
जिरोनामाथि रियलको शानदार जित !
नेपालले अफगानिस्तानलाई दियो १९० रनको चुनौती!